जहाँ भ्यागुता बचाउन सडकमा खटिन्छन् स्वयंसेवी:: Naya Nepal
जहाँ भ्यागुता बचाउन सडकमा खटिन्छन् स्वयंसेवी
सन् १९९० सम्म जर्मनीको राजधानीको रुपमा रहेको बोन सहर दुनियाँको यस्तो सहर हो जहाँ भ्यागुता बचाउन स्वयंसेवीहरु सडकमा खटिन्छन् ।जाडोयाम सकिएसँगै यदि तपाईं बोन सहर पुग्नुभयो भने त्यहाँका सडकहरुमा ठूलो संख्याका स्वयंसेवीहरु भ्यागुतालाई सडक पार गराउनका लागि खटिएको देख्न सक्नुहुनेछ ।बोनमा जब जब गर्मी सुरु हुन्छ तब शीतकालीन निद्रामा रहेका भ्यागुताहरु बाहिर निस्किन्छन् र घुम्न सुरु गर्दछन् । नयाँ ठाउँमा पुग्नका लागि भ्यागुताहरु टाढा टाढासम्म हिँड्दछन् । त्यस्तो त्यस्तो यात्राका क्रममा सडकहरु समेत पार गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ तीव्र गतिमा गाडीहरु चल्दछन् ।
सडक पार गरिरहँदा गाडीले किचेर कैयन् भ्यागुताहरु मर्दछन् । वर्षेनी गृष्मयामको सुरुआतसँगै सडकमा ठूलो संख्यामा भ्यागुताहरु किचिएर मर्ने घटनालाई न्यून गर्नका लागि जर्मनीका केही स्वयंसेवी संस्थाहरु अघि सरे । उनीहरुले भ्यागुतालाई सुरक्षितरुपमा सडक पार गराउने र दुर्घटनाबाट जोगाउने गर्दछन् ।भ्यागुता बचाउनका लागि सञ्चालित उपायहरुका बारेमा बताउँदै एक वन्यजन्तु संरक्षण संस्थाकी निर्देशक मोनिका हाचेलले विगतमा गाडीले किचिएर ठूलो संख्यामा भ्यागुताहरु मर्ने गरेको भए पनि अहिले त्यसरी ज्यान गुमाउने भ्यागुताहरुको संख्या घटाउन सफल भएको बताउँछिन् । अहिले धेरै संस्थाहरुले भ्यागुताहरुलाई सुरक्षितरुपमा सडक पार गराउने काममा स्वयंसेवा गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
भ्यागुता बँचाउनका लागि विभिन्न चरणका विभिन्न खालका तरिकाहरु प्रयोग गरिन्छ । भ्यागुतालाई सडक पार गराउनका लागि कतिपय ठाउँमा सडक मुनि सुरुङ समेत बनाइएको छ । भ्यागुताहरु सोही सुरुङ हुँदै सडक मुनिबाट पार गर्दछन् र आफ्नो गन्तव्यमा पुग्दछन् । यसले भ्यागुताहरु सडक माथि आएर दुर्घटना हुने जोखिम रहँदैन ।साथै कतिपय ठाउँमा भ्यागुताहरुलाई सडकमा आउनबाट रोक्नका लागि तारबारसमेत गरिएको छ ।विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा सरकारी निकायहरु मिलेर बोन सहरमा विभिन्न ८ सय ठाउँका सडक किनारामा भ्यागुता रोक्ने तारबार गरिएको छ । स्वयंसेवीहरु हरेक दिन तारबारमा अडि्कएका भ्यागुताहरु खोज्दछन् र त्यहाँबाट उद्धार गरेर जंगलमा छाड्दछन् ।जीव वैज्ञानिकहरुका अनुसार भ्यागुता पर्यावरणका लागि निकै उपयोगी जीव हो । यसले विषालु तथा हानिकारक किराहरु खाएर नियन्त्रण गर्दछ । साथै भ्यागुताले लामखुट्टे समेत खाने गर्दछ । भ्यागुताले पानीको लेउसमेत खाने गर्दछ । जसले पानीको सफाइमा पनि सहयोग गर्दछ ।
बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुलाई एकीकृत कार्यक्रम बनाउन आग्रह
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ, संस्थाहरुलाई एकीकृत कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी संघ, संस्थाहरुले एकीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेटका साथ काम नगरे बाल अधिकार सुनिश्चित गराउने अभियान प्रभावकारी हुन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
‘एकीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेटका साथ काम नगरे बाल अधिकार सुनिश्चित् गर्ने राष्ट्रिय अभियान अधुरो रहनेछ,’ बाल सहभागितामा कार्यरत संस्थाहरुको साझा समूह (कन्सोर्टियम–नेपाल)ले बुधबार आयोजना गरेको ‘भर्चुअल’ बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘बाल अधिकार सुनिश्चित् गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पनि एकीकृत कार्यक्रम बनाएर अघि बढन म सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुलाई आह्वान गर्दछु ।’ उनले बालबालिकासँग केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा जोड दिएको समेत बताए ।
मन्त्री गुरुङले ‘बालमैत्री नेपाल’ निर्माण हुनेगरी बालबालिका सम्बन्धि १० वर्षे रणनीतिक योजना बनाउने कामलाई तीब्रता दिइएको पनि स्मरण गराए । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको नेतृत्वमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ, संस्थालाई एउटै कार्यक्रमका साथ अघि बढाएर बाल अधिकार सुनिश्चित गराउने अभियानलाई सार्थक बनाउन लागिपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बाल अधिकारकर्मी तारक धिताललगायतले बालबालिकाको हितका लागि उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागितामा मात्रै नीति र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
‘के माया लाग्छ र’ चल्यो, तर सुरविना…?
केही महिना अगाडि एउटा गीत सर्वाधिक चल्यो । निशान भट्टराई र एलिना चौहानको आवाजमा समावेश ‘के माया लाग्छ र’ बोलको गीत सर्वाधिक हिट भयो । यो गीतले चर्चा पाइरहँदा मिडियामा यो गीतको भिडियोमा काम गरेकी नायिका सुरविना कार्की अन्रवार्ताका लागि दौडधुप गरिन् ।
सुरविनालाई अपेक्षा थियो, यो गीत चलेपछि म्यूजिक भिडियोमा उनको माग खुबै बढ्नेछ । यो गीतपछि नेपालमा सय भन्दा बढी म्यूजिक भिडियो रिलिज भैसकेका छन् । तर, सुरविना भिडियोमा देखिएकी छैनन् । यसले गीत चलेपनि उनलाई भने खासै फाइदा नभएको वुझ्न सकिन्छ । एउटा गीत चलेपछि मोडल, गायक–गायिकादेखि सो गीतसँग आवद्ध हरेक व्यक्ति व्यस्त हुने गर्छन् । तर, चलचित्रमा बोल्ड छवि बनाएकी यी सुन्दरीको व्यस्तता खासै देखिएन ।
नेपाली चलचित्रमा पनि आशातित सफलता नपाएपछि मुम्बई पुगेर अभिनय सिकेकी सुरविना अहिले नेपालमै छिन् । मुम्बइमै रहेर फोटोसुट गर्दै आएकी उनी राम्रो चलचित्रको अफर नआउँदा काम गर्न नसकेको बताउँछिन् । करिअरको सुरुवातमा उनले काम गरेका केही चलचित्रले उनलाई नराम्रोसँग झट्का दिएका थिए । जसलेगर्दा, आज पनि उनलाई चलचित्रमा काम पाउन समस्या भैरहेको छ ।सुरविना अब भने दर्शकको मन जित्ने चलचित्रको अफर आउँदा मात्र काम गर्ने बताउँछिन् । आज आफ्नो जन्मदिन मनाइरहेकी यी सुन्दरी करिअरमा सुखद विन्दु आउनेमा आशातित छिन् । सुरविनालाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना ।
टीभीएसको पहिलो क्रुजर बाइक– फिङ्गर प्रिन्टबाट स्टार्ट हुने !
महाअष्टमीका दिन किन दिइन्छ पशुबलि ?
संसारकै सबैभन्दा अनौठो माछा, जसको एउटा दाँत नै एक किलो हुन्छ, मूल्य करोड बढी